Nepali Rajneeti | किन तम्सिए विश्वासको मत लिन ?
किन तम्सिए विश्वासको मत लिन ?
बैसाख २०, २०७८ सोमबार ७६ पटक हेरिएको
प्रतिनिधि सभा (आफैले विघटन गरेको)मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भएका छन् । पुनःस्थापनाको साढे दुई महिनापछि ओली संसद्मा विश्वासको मत लिन तम्सिएका हुन् ।
२७ वैशाखमा ओलीले आफूलाई संसद्मा बहुमतका लागि परीक्षण गर्ने भएछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही प्रयोजनका लागि आइतबार वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
पहिले संसद्को अंकगणित हेरौं ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १२१ छ । नेपाली कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक) सांसद छन् । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत अर्थात १३६ मत चाहिन्छ ।
एमालेका १२१ सांसद छन् । त्यसमा पनि एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षले विश्वास मत दिन्छ वा दिँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । सो समूहका २७ जनालाई ओलीले स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेका छन् । स्मरणीय के छ भने कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरे नेपाल पक्षका चार सांसदले माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यही नियती केन्द्रमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
कांग्रेसका ६० र माओवादीका ४९ जना छन् । माओवादीले एमालेमा गएका चारजनालाई पदमुक्त गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका ३२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र हैसियतका एकएकजना सांसद छन् । ओलीलाई जसपाले साथ दिए विश्वासको मत पुग्छ । तर, जसपाको एउटा पक्षले कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत नदिने अवस्था छ । एमालेमा माधव नेपाल पक्षले ओलिविरुद्ध भोट हालेको खण्डमा सरकारले विश्वासको मत नपाउन सक्छ ।
यसरी हेर्दा संसद्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन सहज छैन । यो चित्र स्वयं ओलीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । त्यसो भए ५ पुसमा आफैँले विघटन गरेको, पछि अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको संसद्मा ओली विश्वासको मत लिन किन तयार भए । जबकि पुनःस्थापनापछिका कुनै पनि संसद् बैठकमा ओली सहभागी भएनन् । संसद् पुनस्र्थापनापछि विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको जोरतोडले राजीनामा मागे । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरे । नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने माग पनि गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले न त नैतिकता देखाए न त विश्वासको मत लिन आवश्यक ठाने ।
तर, अहिले एक्कासि विश्वासको मत लिन किन तम्सिए । विपक्षी दलहरु ओलीले कुनै असंवैधानिक षड्यन्त्र गरिरहेको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । उनले विश्वासको मत पाएनन् भने के हुन्छ ? संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर, उसले पनि सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
प्रधानमन्त्रधी ओलीले खोजेकै यही हो । प्रधानमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाएको देखिन्छ । विश्वासको मत पाइहाले दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने, नपाए मध्यावधि निर्वाचन उनको पूरानै रणनीति हो ।
विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा ओली काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा संविधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नआउने भएपछि संविधानअनुसार नै ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मनसाय बनाएको हुनसक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ । यसरी हेर्दा विश्वासको म लिन तम्सिए पनि ओलीको संसदप्रति विश्वास छैन । अविश्वास पुष्टि गर्न उनले विश्वासको मत लिन खाजेको देखिन्छ । उनको ध्यये अन्नतः मध्यावधि चुनाव नै हो ।